Mukhtaar Roobow Cali Abuu-Mansuur oo isku dhiibay Maamulka Koonfur-galbeed – Puntland Post
Posted on August 13, 2017 August 13, 2017 by PP-Muqdisho
Mukhtaar Roobow Cali Abuu-Mansuur oo isku dhiibay Maamulka Koonfur-galbeed
Xudur (PP) ─ Warar goor-dhaw naga soo gaaray Gobolka Bakool, ayaa waxay sheegayaan in Sheekh Mukhtaar Rooboow Cali [Abuu Mansuur] uu isku dhiibay maamulka Koonfur-galbeed iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Is-dhiibidda Sheekh Abu-Mansuur ayaa ku timid kaddib wadahadallo saacado badan qaatay oo ay yeesheen Sheeekh Roobow iyo mas’uuliyiin maamulka Koonfur-galbeed ka tirsan oo ku sugan Gobolka Bakool, Waxaanu Sheekhu is-dhiibay iyadoo aanay wax ciidammo ah la socon.
Afhayeenka madaxtooyada Maamulka Koonfur-galbeed Nuuraddiin Gacma ayaa u xaqiijiyey warbaahinta, in Sheekh Abuu-Mansuur loo soo qaadi doono degmada Xudur ee Gobolka Bakool.
Sidoo kale, Tallaabadan ayaa imaanaysa iyadoo Mareykanka uu dhawaan ku dhawaaqay inuu liiska kooxaha argagaxisada ah ka saaro Sh. Abu-Mansur oo muddo sannado ah lacagi dul-saarnayd.
Go’aanka Xukuumadda Mareykanka ay Sheekh Abuu-Mansuur uga saartay liiska kooxaha argagaxisada ah ayaa sababtay in Sheekh Rooboow uu kala kulmo culeys kooxdii uu ka tirsanaa ee Al-shabaab.
Ugu dambeyn, Dagaallo labadii maalmood ee lasoo dhaafay Gobolka Bakool ku dhexmaray ciidamada Al-shabaab iyo kuwa Sheekh Mukhtaar Roobow oo loo yaqaan Abu-mansuur ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 40-ruux iyo dhaawac tiro intaas ka badan.
Muuse Biixi oo sheegay in madaxweyne Gaas kala hadlay xiisadda Tukaraq
Faahfaahin dagaalkii Tukaraq ee Puntland iyo Somaliland
Ra'iisul Wasaare Khayre iyo Wafdi uu Hogaaminayo oo gaaray Addis Ababa
Ra'iisul Wasaare Khayre oo Magaalada Addis Ababa kula kulmay dhiggiisa Dalka Itoobiya